डाटा पोइन्ट्स एक आश्चर्य सुपर बाउल वाणिज्यिक विजेता | Martech Zone
डाटा पोइन्ट्स एक आश्चर्य सुपर बाउल वाणिज्यिक विजेता
बुधबार, फेब्रुअरी 11, 2015 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 क्रिस Hoyt
सबैभन्दा प्रभावशाली सुपर बाउल विज्ञापनहरू तपाईलाई लाग्न सक्ने छैन। डाटा संकलन गर्ने हाम्रो क्षमता बढ्दै छ भने, डाटा बुझ्ने हाम्रो क्षमता अझै समातिएको छ। मा पर्सिओहाम्रो डेटा वैज्ञानिकहरूको टोलीले सुपर बाउलको बखत ट्वीटर गतिविधिको गहन विश्लेषण गर्‍यो र पत्ता लगायो कि सब भन्दा लोकप्रिय विज्ञापनहरू राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न आवश्यक छैन। यस लेखको अन्त्यमा एक हो हाम्रो डाटाको अन्तर्क्रियात्मक दृश्य!
नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रियाले अधिक मात्रामा नेतृत्व गर्दछ, तर सकारात्मक भावनाहरूले बढी स more्लग्नता उत्पन्न गर्दछ।
अधिकांश व्यक्तिहरू अहिले कुख्यात राष्ट्रव्यापी विज्ञापनसँग परिचित छन् जहाँ उनीहरूले अन्तमा बच्चालाई मार्छन्। यो स्तब्ध पार्ने र अनौठो निर्णयले सोशल मिडियामा ठूलो प्रतिक्रियाको लागि निम्त्यायो। धेरै बजार कम्पनीहरु जारी भइसक्यो सब भन्दा ट्वीट गरिएको परिणाम राष्ट्रव्यापी विजेताको रूपमा देखाउँदै, तर हामी शंकास्पद थियौं।
हाम्रो सोच यो हो कि नकारात्मक प्रतिक्रियाले धेरै ट्वीट्समा नेतृत्व गर्दछ, यो सम्भवतः राष्ट्रव्यापी वास्तवमै चाहिने गतिविधि होइन। अन्त्यमा, यो सायद माइक्रोसफ्ट नै हो सामाजिक मिडिया जित्नुभयो सुपर बाउलको बखत।
अध्ययन कसरी काम गर्‍यो
सबै भन्दा पहिले, त्यहाँ थिए २.28.4..XNUMX मिलियन ग्लोबल ट्वीट खेलको बखत। हाम्रो इन्जेस्ट सर्भरले यस अध्ययनको लागि ती मध्ये of मिलियन समेट्यो। हामी सोच्छौं कि यो एकदम राम्रो नमूना आकार हो, बारेमा 32%.
यो पर्सिओ अध्ययन सबैजनाबाट फरक छ कि हामी सबै ट्वीटबाट नमूना बनाइरहेका छौं, र विज्ञापनदाताको खातामा बाँधिने मात्र होइन। यसको मतलब यो छ कि हामीसँग ट्विटर एपीआई बाट तान्न सक्ने भन्दा बढि जानकारी छ।
हामीले दुबै प्रयोग गरेर ट्वीटबाट डाटा तान्यौं प्राकृतिक भाषा प्रत्यक्ष रूपमा @ आधिकारिक ट्विटर उल्लेख। उदाहरण को लागी, सबै ट्वीटहरु संग तुलना mcdonald सबै प्रकारहरूमा (डब्लू / ओ क्यापिटलाइजेशन वा बहुवचन) र मिलान McDonalds.
हामी सबै ट्वीट्सलाई केहि भनेर चिनिन्छौं भनेर चलाईयो भावनात्मक विश्लेषण जो एक ट्वीट सकारात्मक वा नकारात्मक (ध्रुवीयता), साथै तथ्यात्मक वा राय (Subjectivity) छ कि छैन निर्धारण गर्न एल्गोरिदम प्रयोग गर्दछ।
हामीले यसको लागि एक धेरै _____ सूची कम्पाइल गर्यौं सब भन्दा ट्वीट गरिएको, धेरै प्रभावहरू, र सब भन्दा औसत छाप.
प्रत्येकको मुनि पुल आइटम, हामीले शीर्ष १० रीट्वीट सूचीबद्ध गरे ताकी हामी दृश्यात्मक रूपमा पुष्टि गर्न सक्दछौं कि प्रत्येक आइटम को ट्र्याफिक कस्तो थियो।
कच्चा नम्बरहरू - खण्डबाट ब्रान्डहरू
प्रदर्शन एक - "प्राकृतिक भाषा" मा अधिक ट्वीटहरू देखाउँदै
प्रदर्शन ए मा, हामी पहिले यो नोट गर्न चाहन्छौं कि म्याकडोनाल्डहरू वन शुद्ध भोल्यूममा। यद्यपि हाम्रो डाटा वैज्ञानिकहरूले उल्लेख गरे कि सुपर बाउलमा जाँदा, म्याकडोनाल्डहरू पहिले नै वास्तवमै उच्च ट्राफिक थिए।
त्यसोभए प्री-गेम ट्राफिकको आधार-रेखाका लागि समायोजन गर्दै राष्ट्रव्यापी उनीहरूको वाणिज्यिकबाट भोल्यूमको विजेताको रूपमा गणना गर्न सकिन्छ।
साथै प्रदर्शन ए मा तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ कि राष्ट्रव्यापीको नजिक स्किट्स, पेप्सी र डोरिटोस हो। माइक्रोसफ्ट वास्तवमा सूची तल टाढा छ, त्यसैले तपाईं यस बिन्दु मा सोच्न सक्छ; हामी किन माइक्रोसफ्ट जित्छौं? ठिक छ, त्यो किनभने त्यहाँ व्यक्तिहरू कुरा गर्ने तरिका र सामाजिक मिडिया कार्यहरू गर्ने बीचमा एक बिच्छेदन छ।
स vs्लग्नता बनाम कुराकानी
व्यवसायको लागि ट्वीटलाई मूर्त चीजमा परिवर्तन गर्नका लागि, त्यहाँ केही प्रकारको कार्य हुनुपर्दछ। ट्विटरका लागि, सब भन्दा स्पष्ट कार्यहरू हुन्:
केहि रीट्वीट गर्नुहोस्
ब्यापारको खाता अनुसरण गर्नुहोस्
ट्वीटमा लिंक क्लिक गर्नुहोस्
त्यसोभए हामीले डाटामा फेरि हेरेका थियौं कि कसले धेरै पाए स्टक तिनीहरूको ट्विटर भोल्यूम र शीर्ष5हुन्:
McDonalds (फेरी, तिनीहरू पहिले नै उच्च मात्रामा थिए)
त्यसोभए यहाँ तपाईले देख्नुभयो कि माइक्रोसफ्टले पहिले नै राष्ट्रव्यापी भन्दा अझ राम्रा कार्यहरू गरिरहेको छ वास्तवमा धेरै भन्दा धेरै कार्यहरू पाउँदा। हामीले ट्विटर स्ट्रिमहरूमा शीर्ष यूआरएलहरूको भिजुअल जाँच पनि गरेका थियौं, र माइक्रोसफ्टसँग प्राय: लिंकहरू आफ्नै डोमेनमा फर्कनेहरू छन्। तर के गर्ने? ट्विटरमा को सबैभन्दा अधिक प्रेम भइरहेको छ?
सकारात्मक बनाम नकारात्मक भावना
प्रदर्शन बी - खाता र शीर्ष प्राकृतिक भाषा खोजी polarity (सकारात्मक वा नकारात्मक) र subjectivity (तथ्य वा राय) अनुसार म्याप।
प्रदर्शन बी मा, तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो सबै @accounts र शीर्ष प्राकृतिक भाषा खोजीहरू ध्रुवीयता (सकारात्मक वा नकारात्मक) र subjectivity (तथ्य वा राय) अनुसार म्याप गरिएको। सबैभन्दा सकारात्मक ब्रान्डहरू थिए keस्केचर्सुसा, @BMW, र ix विक्स। हाम्रो सबैभन्दा नकारात्मक ब्रांडहरू थिए victorias secret, t-मोबाइल, र कुनै आश्चर्य छैन राष्ट्रभर। त्यसोभए तपाईले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ कि राष्ट्रव्यापी ट्राफिकको अधिकांश हिस्सा नकरात्मक थियो।
उच्च मात्राको लागि, म्याकडोनाल्ड र माइक्रोसफ्ट शीर्ष को शीर्ष थिए। यसको मतलब तिनीहरू केवल धेरै यातायात प्राप्त गरिरहेको छैन, तर कुराकानी ज्यादै सकारात्मक छ।
त्यसोभए यदि तपाइँ यी सबै थप्नुहुन्छ, माइक्रोसफ्ट मात्र छ शीर्ष दावेदार सबै तीन मेट्रिकमा राम्रो गर्दै: भोल्यूम, सगाई, र भावना।
अवश्य पनि, र हामी यो स्पष्ट भएको चाहन्छौं, जबकि हामी सोच्छौं कि माइक्रोसफ्टले सुपर बाउल वाणिज्यिक प्रतियोगिता जित्यो; म्याकडोनाल्ड्स सोशल मिडिया जित्ने, सबै समय देखिन्छ।
Caveats र ट्रिभिया
जब हामी धेरै ट्वीटहरू तान्यौं, यो ती सबै थिएन। यदि हामी १००% हेर्दै थियौं भने यस डेटा केहि परिवर्तन हुन सक्दछ।
अन्य स्रोतहरूले बुडवीजरलाई सूचीको शीर्षमा राख्यो, र हामी यसको लागि कुनै कारण फेला पार्न सक्दैनौं। हामी जान्दैनौं किन भिन्नता, तर हामी यसलाई स्वीकार्न चाहान्छौं।
म्याकडोनाल्डको लागि हाम्रो आधार-रेखा हाम्रो दृश्यहरूमा फ्याक्टर गरिएको छैन किनकि हामी सबैका लागि बेसलाइनहरू थिएनौं। म्याकडोनाल्ड्सले केवल खेलमा जानको लागि धेरै ठूलो स्पष्ट बज देखाउँदछ जुन हामीले यसलाई हाम्रो निष्कर्षमा पार्नु पर्ने थियो।
cedmercedesbenz र @ वेटवाटचरहरू सबैभन्दा टु .्गिएको प्रति-ट्वीट देखेर उनीहरूको ट्वीटमा सब भन्दा बढी जोडिएको दर्शकहरू थिए।
हामीले कब्जा गरेनौं #लाइक गर्ल जुन एक लोकप्रिय ह्यासट्याग थियो (हाम्रो खराब)। यद्यपि, अन्य अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि यसले अझै पनि हाम्रो नतीजालाई असर गर्न एक भोल्युममा पुगेको छैन।
पर्सिओ तपाईंको व्यवसाय साझेदार हो बिग डाटा अवसरहरू सिर्जना गर्नमा केन्द्रित। हाम्रो अनौठो विशेषज्ञताले हामीलाई बिग डाटाको टेक्निकल संसार र व्यापार रणनीतिको व्यावहारिक पक्षहरू बीचको अन्तर खाली गर्न अनुमति दिन्छ। हामी तपाईसँग रणनीति परिभाषित गर्न, उत्पादनहरू छनौट गर्न, समाधानहरू कार्यान्वयन गर्न र डेटा विश्लेषण र दृश्यको लागि संगठनात्मक क्षमता निर्माण गर्न कार्य गर्दछौं। थप जान्नुहोस् र हाम्रो ह्वाइटपेपर डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यहाँ डाटाको ठूलो संसार छ.
टैग: सधैंउत्तम व्यावसायिकउत्तम सुपरबोबल वाणिज्यिकठुलो डेटाBMWलेक्ससम्याकडोनाल्ड गरेकोMicrosoftराष्ट्रभरभावनाभावनात्मक विश्लेषणस्किचरहरूस्केचर्सुसासामाजिक विश्लेषणसामाजिक संजालसुपर कटोरासुपर बाउल वाणिज्यिकsuperbowltwitterwix
Chris Hoyt Wednesday, February 11, 2015 Sunday, October 4, 2015
क्रिस को मार्केटिंग निर्देशक हो पर्सिओ, एक व्यापार पार्टनरले उनीहरूको ग्राहकहरूको लागि ठूलो डाटा अवसरहरू सिर्जनामा ​​केन्द्रित, जहाँ उनले ब्रान्डि logo र मेसेजि developed ग्राउन्ड अपबाट, लोगोबाट बिक्री फनेलसम्म विकास गरेका छन्।
ट्विटरमा नररतिफसँग के कुरा सुन्नुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ "होल्ड मार्केटिंग" अवस्थित छ?